Erectile အလုပ်မဖြစ်စေ Porn Tube ဆိုဒ်များဖြစ်ပါသလား (2013)
ဆောငျးပါး: ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များကိုကင်းဖို့ကဘာလဲဆိုတာအက်ကွဲ porn မှဖြစ်လိမ့်မယ်?
မင်းအရင်ဖတ်ပြီးပြီလား ညစ်ညမ်းမှုသည်ရှေးအချိန်ကတည်းကကတည်းကရှိခဲ့ပြီးအင်တာနက် porn သည်အခြေခံအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်အခြားဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောနေကြသည်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းသောဖောက်သည်များနှင့်ကုသသူများအနေဖြင့်ကြားရန်လိုအပ်သည်
ပြွန်နေရာများမှတဆင့်ရရှိနိုင်သည့်ဝတ္ထု erotica ၏အတိုင်းအတာနှင့်ပြင်းထန်မှုကိုလူ့သမိုင်းတွင်ဘယ်သောအခါမျှပုံတူပွားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်လိင်ကျန်းမာရေးအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ပုံရသည်။ (ညစ်ညမ်းစာကိုစွန့်လွှတ်ပြီးသည့်နောက်၌ပင်၊ အဘယ်သူမျှမလိင်စိတ်လ စွမ်းဆောင်ရည် restore မှ။ )
“ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာပြွန်ကွန်ရက်တွေကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ... steroids အပေါ် .porn ကြီးတွေအချိန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဆိုလိုတာကတော့ ၁၅ စက္ကန့်ကလစ်အနည်းငယ်လောက်ရှာပြီး download လုပ်ဖို့စောင့်နေတယ်။
"ဒါဟာငါပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်းတစ်ခုသာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ခဲ့, ငါသူတို့အားသင့်ဦးနှောက် warping များအတွက်အဆိုးဆုံးဖြစ်ကြသည်ထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ "site site" ဆိုတာဘာလဲ။ ညစ်ညမ်းဝါရင့်သမားတစ် ဦး က
Mid-2006 ခုနှစ်, porn လောကီသားတို့သည်တစ်ဦးအသွင်ပြောင်းခံယူ။ အဓိကကစားသမား (PornoTube / RedTube / YouPorn) အားလုံး မိတ်ဆက် youtube-စတိုင် streaming များဗီဒီယိုများ။ ဒီအရေးပါတဲ့အဖြစ်အပျက်မတိုင်ခင်ဗွီဒီယိုကိုကူးယူပြီးဖွင့်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နိုင်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံသင့်တွင်သင့်တော်သောဆော့ဝဲလ်မရှိသောကြောင့်၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်မလုပ်မီနှင့်“ ပျော်မွေ့ခြင်း” မပြုမီသင်မြင်လိုသည်ကိုသေချာစေရန်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသီးခြား site တစ်ခုသို့သင်သွားကြည့်ပါ၊ တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုအသစ်သောဗီဒီယိုနှင့်မှာထားခဲ့ပါ။
မကြာသေးမီကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာတင်ခြင်းသည်ဗီဒီယိုပြခန်းတည်နေရာများ (ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော 'ပြွန်ဆိုဒ်များ' ဟုရည်ညွှန်းသည့်) လမ်းကြောင်းသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်၊ ၄ င်းသည်မတူညီသောညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များမှပြွန်ဗီဒီယိုများ၏သမ်းနေးစာမျက်နှာများကိုစုစည်းထားသည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်စဉ်မှန်းဆခြင်းမရှိ၊ ခဏရပ်နားပါ။ ၁၀၀ ခန့်လောက်သော screenshots များပါ ၀ င်သည့်ဗီဒီယိုသေးသေးလေးများဖြင့်ကြည့်ရှုပြီးသင်၏လှေကိုမျောမျောနေသည့်ပုံကိုကြည့်ပြီး၎င်းကိုနှိပ်ပါ။
သို့သော်၊ ညစ်ညမ်းသည့်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသူများသည် hits များရလိုကြသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ကလစ်သည်သင့်ကိုထိုဗီဒီယိုသို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်ကြည့်ရှုရန်မရည်ရွယ်သောအခြားဆိုက်တစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ ။ ယခုတွင်သင်သည်စာမျက်နှာငယ်နှစ်ခုပွင့်နေပြီ။ အစပိုင်းမှာတော့သင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ပြီ၊ ဒါပေမယ့်အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာပြီးတဲ့နောက်၊ စာမျက်နှာအသစ်ပေါ်ရှိတစ်ခုခုသည်သင်၏မျက်စိကိုဖမ်းလိုက်ပြီးသင်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ၊ ခလုတ် ၂၀ နှိပ်ပြီးဖွင့်သည်အထိ… .and သည်။
ခဏလေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင်သင့် erotica ကိုအဘယ်ကြောင့်ဤမျှများပြားစွာစွန့်စားရသည့်အကြောင်းရင်းနောက်ကွယ်ရှိသိပ္ပံကိုကြည့်ပြီးအသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပရမ်းပတာဖြစ်မှုကိုကြည့်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်အခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ထံမှပြွန်ဆိုဒ်များနှင့်မည်သို့ကွာခြားသည်ကိုပထမ ဦး စွာနားထောင်ကြပါစို့။
ကာယပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိသည်။ ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတွင် (crap) ပုံပြင်ကိုပိုမိုအလေးထားလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ထိတွေ့မှုအချို့ကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည် (သင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်မကြုံတွေ့ရသော်လည်းသင်သည်ထိုအတွေးများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုချိတ်ဆက်နေသည်။ ) သို့သော်ပြွန်နေရာတစ်ခုတွင်ကလစ်တစ်ခုသည် ၃-၅ မိနစ်မျှသာကြာလေ့ရှိသည်။ သင်သည်3မှ 5mph သို့သွားသည်။ နှိုးဆွပေးခြင်းသည်နှေးကွေး။ သက်သောင့်သက်သာမရှိဘဲမျှော်လင့်ထားသည့်တည်ဆောက်မှုကိုလှောင်ပြောင်သည်မဟုတ်။ Full-on အော်ဂင်နစ်ဖ်ဘုရင်ကိုဖြောင့်သည်။
ပြွန်ကလစ်များသည်တိုလွန်းသဖြင့်သင်သည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးအတွက်ဝတ္ထုကလစ်များကိုအများကြီးပိုနှိပ်သည်။ တစ်ခုမှာနှိုးဆွမှုကိုတည်ဆောက်ရန်အလွန်တိုလွန်းသည်၊ သင်ကမကြည့်မချင်းရုပ်ပုံတွင်အဘယ်အရာဖြစ်မည်ကိုသင်မသိပါ; အဆုံးမဲ့သိချင်စိတ်၊
ဒါဟာယောက်ျားကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ၏စောဒကနှင့်၎င်းတို့၏လျှင်အံ့သြကြှနျုပျတို့၏ website မှာတက်ဖေါ်ပြခြင်းစတင်ခဲ့ကြောင်း 2006 န်းကျင်ခဲ့သည် မျှော်လင့်မထားတဲ့လက္ခဏာတွေ porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။ ယခုတွင်လှည့်ကွက်တစ်ခုသည်ဆူနာမီဖြစ်လာပြီးဝက်ဘ်တစ်ခွင်ရှိယောက်ျားများသည်အလွန်ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများနှင့်အခြားလက္ခဏာများကိုညည်းညူကြသည်။ အင်တာနက် porn ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှအမြန်နှုန်းနှင့် torrent downloads များပေါ်ပေါက်လာချိန်တွင်၊ porn-related ပြproblemsနာများတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှယောက်ျားများစွာသည်ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များမတက်မချင်းပြင်းထန်သောပြproblemsနာများကိုသတိမပြုမိခဲ့ကြပါ။
ပထမဦးဆုံးအကောင်လေး: ငါအများကြီးဗီဒီယိုကိုမကြည့်လေ့ရှိတယ်; ယခုတွင်သင်သည် ___.com ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားပြီးဗွီဒီယိုရှာဖွေခြင်း - Wallah ကိုလုပ်နိုင်သည် - သင်ကြည့်ရှုရန်ဗီဒီယိုများစွာနှင့်ဒါဇင်များစွာကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အမျိုးမျိုးကိုအမျိုးမျိုး။ ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းသည်ရုပ်ပုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြင့်ဆုံးအနေအထားတွင်“ ခြေလှမ်း” ဖြစ်သည်။ ငါတစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွင်းအချို့သော ED လက္ခဏာတွေသတိပြုမိလာတယ်။
ဒုတိယအကောင်လေး: ငါ့အတွက်, ပြွန်နေရာများသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲအထိခေါင်းတလား၌နောက်ဆုံးလက်သည်းဖြစ်သည်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာ (ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်း) ပုံများနှင့်ရံဖန်ရံခါမှဗီဒီယိုကလစ်များကိုကြည့်ခဲ့သည်။ ပြွန်နေရာတွေကကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော်ဟာ ED ပြproblemsနာတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ, သူတို့ရဲ့အဆုံးမဲ့ကလစ်များချက်ချင်းလက်လှမ်းမီနှင့်အတူ, ငါ့ ဦး နှောက် overload သို့ပစ်ချထင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်၏ပျော်ရွှင်သောတုံ့ပြန်မှု၏အစစ်အမှန်ဂဏန်းများစတင်သည့်အခါဖြစ်နိုင်သည်။ streaming video sites များဘယ်တော့မှမကြည့်ဖူးတဲ့ယောက်ျားများ (ရှိလျှင်ရှိလျှင်) နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုသာသာမှီဝဲသောယောက်ျားများအကြားဖြန့်ဝေခြင်းကိုကြည့်ချင်သည်။ အလားအလာရှိစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်ဘူး။
တတိယကောင်လေး: ငါဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်မှာ ED ပုံသဏ္developingာန်မဖွံ့ဖြိုးဘဲဓါတ်ပုံတွေကိုသာကြည့်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မတ်လမတိုင်မီအထိကျွန်ုပ်သည်ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များသို့ပုံမှန်မလည်ပတ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြန်နှုန်းအလွန်မြန်စွာရသည့်အချိန်တွင်။ ၆ လအတွင်းမှာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ငါ 'ဆက်နွယ်မှုဆက်စပ်မှုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မညီမျှ' ကြောင်းကောင်းစွာသိတယ် ... ဒါကြောင့်ငါသံသယ၏ကျန်းမာဒီဂရီကောင်းသောစိတ်ကူးထင်ပါတယ်။ အသက်ဟာငါ့အတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမြဲတမ်းငါထင်ခဲ့တယ်။
စတုတ္ထကောင်လေး [တတိယကောင်လေးအားတုံ့ပြန်ချက်] - ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၁ နှစ်ဖြစ်ပြီး ED ကွန်ရက်သို့ကူးပြောင်းခြင်းခံရသည်။ အသက်ဟာမသက်ဆိုင်ပါဘူး
အဆုံးမဲ့ဝတ္ထုပြွန်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများနှင့်သူတို့၏“ ဗွီဒီယို၏အပူဆုံး byte” သမ်းနေးများသည်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည် supernormal ဆွ-လူ့ ဦး နှောက်နှင့်အတူပုံမှန်မိတ်လိုက်အချက်များ (နှင့်ကြိမ်နှုန်း) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ပြွန်နေရာများသည်လူတို့၏အဓိကနှိုးဆွပေးသည့်အနှောင့်အယှက်များကိုဟန့်တားစေသောကြောင့်၎င်းတို့သည်လိင်ဆိုင်ရာကိစ်စများအတွက်စစ်မှန်သောလိင်ဆုကျေးဇူးများကိုစွန့်လွှတ်ရန်လှည့်စားနိုင်သည်။ ဒါကတခြားတိရိစ္ဆာန်များမှဖြစ်ပျက်။ ဥပမာအားဖြင့်, အထီး julodimorpha ကောင်လေးတွေ အိမ်ထောင်ဖက်အဘို့အနီ-အညိုရောင်ပုလင်းအမှားသူတို့နှင့်အတူမိတ်မှအချည်းနှီးကြိုးစားမှုအတွက်မိမိတို့၏တိုတောင်းသောဖြစ်တည်မှု၏ချိန်ခွင်လျှာဖြုန်းနေကြတယ်။
ကျနော်တို့လူသားမြားသညျ နားလည် သာ။ ကြီးမြတ်စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုလမ်းအဖြစ်သာ။ ကြီးမြတ်အသစ်အဆန်း။ သို့သော်သတိပြုသင့်သည် စိတ်ကျေနပ်မှုအမှန်တကယ်ကြောင်းလမ်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဂျင်းဘောင်းဘီကို ၀ ယ်ရင်တောင်။ မည်သည့်အရာသည်မည်မျှပြီးပြည့်စုံစွာပင်ရှိနေပါစေ၊ ရွေးချယ်စရာများပိုမိုရရှိနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်ပြီးဆက်ရှာရန်အားပေးသည်။ John Mayer ကိုသတိရပါ Playboy အင်တာဗျူး?
သင်ရှာဖွေနေသည်။ သင်ကျိန်ဆိုသည်မှာ ၁၀၀ အနက်မှသင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မည်၊ သင်မပြီးနိုင်သေးပါ။ လွန်ခဲ့သောစက္ကန့်နှစ်ဆယ်က [thumbnail] သည်သင်မြင်ဖူးသမျှအပူဆုံးအရာဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းသင်ပြန်ပစ်ချပြီးရိုက်ချက်ကို ဆက်၍ အလုပ်ပြန်လုပ်ရန်နောက်ကျကျန်နေခဲ့သည်။
စိတ်ပညာရှင်၏သုတေသနအလိုအရ barry Schwartz, အဆမဲ့ရွေးချယ်မှုပျော်ရွှင်မှုကိုများအတွက်စာရွက်မဟုတ်ပါ။ ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များကိုအလွန်းဇီဇာကြောင်စေလျှင်, ငါတို့သည်အံ့သြပီတိဖြစ်ဘယ်တော့မှနိုင်ပြီး, အလွယ်တကူကျနော်တို့ပိုကောင်းပွုပါပွီအံ့သောငှါကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အစွဲအလမ်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘဝထဲကဝမ်းမြောက်ကြာပါသည်။
၀ တ္ထု ၀ တ္ထုများ“ မူးယစ်ဆေးဝါးများ” သည်အမြန်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်ရန်အငြင်းပွားနေသောကြောင့်အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ပြီးပြည့်စုံသောကလစ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်မှုထက်“ fertilize” လုပ်ရန်အချိန်များစွာကုန်လွန်ကြသည်။ များစွာသောသူတို့သည် compulsive သဘောထားများပိုမိုဆိုးရွားကြောင်းအစီရင်ခံကြသည်။ အလွန်အမင်းငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည်မှာအထွတ်အထိပ်ပြီးနောက်၌ပင်တင်းမာမှုနှင့်မကျေနပ်မှုခံစားရကြောင်းဖော်ပြသည်။
သူတို့ရဲ့အပြုအမူကို ဦး နှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုကမောင်းနှင်ပေးတယ်၊ အဲဒါက go go it get neurochemical, dopamine ။ အတူတူ, မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းအသံချဲ့စက် ပြွန် surfing တကယ်အရေးကြီးပါတယ်သောမက်ဆေ့ခ်ျကို-နှင့် ဦး နှောက်အညီဆက်စပ်သော circuit ကိုခိုင်မာစေ။ Schwartz ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အညီတစ် ဦး ဂျာမန်အသင်း ကြောင်း porn-related ပြဿနာများအများဆုံးဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရ, အချိန်နှင့်အတူဒါပေမယ့်ဖန်သားပြင်အရေအတွက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် arousal ၏ဒီဂရီနှင့်အတူကြည့်ရှုသုံးစွဲဘူး။
ပြွန်နေရာဘူဖေး၏ဒုတိယအန္တရာယ်မှာအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။ မက်ဆာချူးဆက်ဆေးတက္ကသိုလ်မှကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဆေးပညာဌာနမှပါမောက္ခတစ် ဦး ဖြစ်သူ Sheri Pagoto PhD ကရေးသားခဲ့သည်။
အစာစားချင်စိတ်ပေါ်လေ့လာရေးအမျိုးမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန် overconsumption နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသပါ။ သငျသညျလိမ့်မည်ထက် meatloaf စားပွဲပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်အခါသင်တစ်ဘူဖေးမှာပိုပြီးစားလိမ့်မည်။ မမြင်ကွင်း၌သင်တို့ကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်ချန်ထားမည်မဟုတ်တဦးတည်း၌သင်တို့ကိုမကျေနပ်သည့်စွန့်ခွာမည်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်း [သငျသညျ overconsumption နှင့်၎င်း၏ပြဿနာများကိုကျော်လွှားချင်တယ်ဆိုရင်] ခုနှစ်တွင်အသက်တာ၏ဘူဖေးရှောင်ကြဉ်ပါ။
ပါမောက္ခ Pagoto ကြောင်းထောက်ပြ,
အလွန်ပြင်းထန်သောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပုံစံများကိုမကြာခဏရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲသူသည်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှလိင်အပျော်အပါးကိုမခံစားနိုင်အောင်ဖွံ့ဖြိုးလာလိမ့်မည်။ ပြီးတော့အလေ့အထကရှည်လျားသွားရင်ညစ်ညမ်း မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမှမပျော်နိုင်ပါ။ ဒီအပြုအမူပုံစံကတကယ်တော့ ဦး နှောက်ရဲ့အခြေခံကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။ သင်တွေးကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်းလေးနက်သောပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ပထမ ဦး စွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ, ထို့နောက်ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများ, ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြproblemsနာများ။
အစားအစာသို့မဟုတ်လိင်မှုနှိုးဆွမှုသည်“ မကောင်း” မဟုတ်ပါ။ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု“ ဖြစ်လာသည်” သောအခါအခြေအနေများကတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားသည် လိုအပ်သောသာမန်ဘဝအတွေ့အကြုံများထက်ပိုမိုသော 'သွားခြင်း' သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ တစ်ဦး 2011 လေ့လာမှု (USA) “ [porn] အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုလျော့နည်းခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ”
ဦးနှောက်ကိုလှုံ့ဆျောမှပြောင်းလဲသောကွောငျ့ In-သင့်ရဲ့-မျက်နှာအမျိုးမျိုးအဆုံးမဲ့ (Higher-ထက်ပုံမှန်အတိုင်းစားသုံးမှုကိုအားပေးအားမြှောက်မသာ အသစ်အဆန်းကိုလိုက်) ။ ဒါဟာပုံမှန်အားလည်း အပျော်အပါးမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေ။ တစ်ခုမှာဘုံရလဒ်ကျေနပ်မှု၏ခံစားချက်များကိုလျော့နည်းသွားသည်, ဦးနှောက်ကို ပို. ပို. လိုသည်။
porn ဘူဖေး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်နောက်ထပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုယောက်ျားမကြာခဏဖြစ်ပါတယ်သတင်းပို့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်ဆုံးရှုံး။ အပျော်အပါးမှတုန့်ပြန်မူအကျင့်များနှင့်ဓာတုနှစ်ဦးစလုံး, ရှိသမျှစှဲအတွက်ဘုံဖြစ်ပါတယ်လျော့နည်းသွားသည်။ စိုက်ထူခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်တဲ့အတွက် dopamine မှ sensitivity ကိုအပေါ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်မှီခိုအဖြစ် ဦးနှောက်ရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းဒါကြောင့် dopamine တစ်လျော့နည်းသွား sensitivity ကိုလည်းလျော့နည်းလိင်တုံ့ပြန်မှုတချို့အသုံးပြုသူများကိုအောင်သည်ဟုယူဆရသည်။
သို့သော်တစ်ဦး numbed အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု အထူးသဖြင့်အငယ်ယောက်ျားတွေအဘို့, ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးတည်းသာအချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကဖြစ်ပေါ်လာ သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု wiring လိင်မှုကိစ္စနှင့်အလွန်ကွာခြားသောလိင်မှုဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုသုံးဖက်မြင်မိတ်ဖက်ပေါ်လာသည့်အခါသူတို့သည်အမှန်တကယ်သဘောတူညီမှုကိုပုံမှန်တုံ့ပြန်လေ့မရှိပါ။ ကြည့်ပါ Porn ဝါ့ပ်ငါ့ကိုထာဝစဉ်ခဲ့သလား (Salon.com), တစ်ဦး 23 နှစ်အရွယ်ကရေးသား။ နောက်ထပ်ငယ်ရွယ်ကောင်လေးကရှင်းပြသည်,
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုရိုက်တာဟာလုံးဝမအောင်မြင်ပါ။ မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သင်သိသမျှအားလုံးသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထိတွေ့မှုဖြစ်စဉ်တွင်အမှန်တကယ်ပါ ၀ င်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ အမြင်အာရုံ၊ အနံ့နှင့်ခံစားချက်များသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ အမြင်အာရုံအရသင်၏ရှုထောင့်သည်ကင်မရာသမားတစ် ဦး ၏အမြင်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးသည့်အမြင် (မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ) အပေါ်အာရုံစိုက်ရုံသက်သက်သာမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာ soooo ကွဲပြားခြားနားပါတယ်
လူတွေကစုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုခံယူပိုင်ခွင့်ရှိပြီးလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိရင်ဈေးကွက်ကိုရောင်းနိုင်သမျှသွေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်တုံ့ပြန်လိမ့်မယ်။ ဈေးကွက်မက်လုံးသည်သုံးစွဲသူများအပေါ်အပေါင်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေသော superstimulus ထက်ကျော်လွန်နေပါသည်။ —Eliezer Yudkowsky
အဘယျသို့ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ porn ၏ဘာမြူဒါတြိဂံစေသည်? အမျိုးသားများ၏အစီရင်ခံစာများကိုကြည့်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်မှာ -
တစ်ဦးပြွန် site ကိုအသုံးပြုခြင်း, အသုံးပြုသူများယခင်ကထက် session တစ်ခုနှုန်းကပိုအသစ်အဆန်းကိုရှာနှင့်စားသုံးကြသည်။ သူတို့ဟာ overconsume နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးမှမိမိတို့၏တုံ့ပြန်မှု numbing အန္တာရာယ်လေ့ရှိပါတယ်။
ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်ပုံငယ်များ / ကလစ်ပ်, အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်းများနှင့်အပေါများပစ္စည်းကြောင်း မျှော်လင့်ချက်များချိုးဖောက် supernormal stimulation ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူများရဲ့လိင်မှုကိစ္စကိုစစ်မှန်သောအိမ်ထောင်ဖက်များထက်ဆုချခြင်း circuit မ်ားကို goose လုပ်တဲ့ pixel များနဲ့ rewire လုပ်နိုင်ပါတယ်။
စုံလင်သောကလစ်များအတွက်ရှာဖွေမှုစိုးရိမ်စိတ်တက် ratchet လေ့ရှိပါတယ်။
သင်က porn ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလျှင် Pompeii ရှိဂူနံရံများနှင့်ပန်းချီကားများကိုဆွဲရန်စဉ်းစားပါ။ သင်၏ဘိုးဘေးများ၏စိုက်ထူမှုများသည်ယုံကြည်စိတ်ချရဆဲဖြစ်သောကြောင့်သင်ဤတွင်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပါကအချို့ကိုစစ်ဆေးပါ အခြားသူများ၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ.
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှ စ၍ လူငယ်ယောက်ျားများအားလိင်မှုကိစ္စကိုအကဲဖြတ်သည့်လေ့လာမှုများအားလုံးသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ - သုတေသနနုပျို ED အတွက်ကြီးမားမြင့်တက်အတည်ပြု
“ မှကောက်နုတ်ချက်များ။Smut ၏ Geek-ဓမ္မရာဇဝင်,” ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ၏သက်ရောက်မှုများအကြောင်း NewYork မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါး -
ဒါဟာစက်မှုလုပ်ငန်းတွေမကောင်းဆိုးဝါးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကြီးပါပဲ” ဟု Feras Antoon က Las Vegas ရှိ Venetian ရှိ Emeril Lagasse steakhouse၊ Delmonico ရှိနံရိုးမျက်လုံးနှင့်ကျောက်ပုစွန်အမြီးကိုပြောပြသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်သူသည်ပြွန်များသည်အခကြေးငွေပေးရသောအကြောင်းအရာများကိုမကြေငြာနိုင်ပါဟုအခိုင်အမာပြောဆိုသည်။ အခမဲ့ porn ကိုသာစားသုံးသူများသည်ယခင်ကမည်သည့်အရာကိုမဆိုစားသုံးခြင်းမခံရသူများဖြစ်သည်ဟုသူကအခိုင်အမာဆိုခဲ့သည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုငွေပေးချေတဲ့သူတွေကအခုပေးရမယ်။
Plus အား ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များဒါစှာပေးဆောင်သောသူတို့၏အမျိုးအအရေအတွက်ကိုကနှင့်အတူ ballooned မူကြောင်းကို porn စားသုံးသူများ၏စုစုပေါင်းဝဠာကိုကျယ်စေပါပြီ။ ဆယ်ပါးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစုစုပေါင်းနေ့စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-site ကိုအသွားအလာနည်းသည်ထက် 1 သန်းထူးခြားတဲ့ဧည့်သည်များ-အပေါ်တစ်ခုလုံးကိုအင်တာနက်ကိုပျမ်းမျှ; ယနေ့တပါးတည်းသာလျှင် Manwin ရဲ့ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ 42 သန်းနေ့စဉ်ထူးခြားတဲ့ရ။ “ ကျွန်တော့်မှာအသင်းဝင်တစ် ဦး၊ နှစ် ဦး ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ appetizer ကိုပြွန်များထဲမှတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်၏အဓိကသင်တန်းကိုဆိုဒ်တစ်ခုမှရပါသည်။ …
သို့သော်ဤခဲသဘောတူညီမှုအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တော် NaughtyAllie.com ၏အော်ပရေတာ Allie Chase သည်ထုတ်လုပ်သူများစွာသည်အစာစားချင်စိတ်ကိုတွန်းလှန်ရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ပြွန်ဆိုဒ်များသို့တမင်တကာတင်ထားသောငါးမိနစ်တွဲတွဲများနှင့်ပင်ပြissueနာတက်သည်။ “ ငါးမိနစ်လောက်ကြာတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်နေတဲ့ပျမ်းမျှကောင်လေးတစ်ယောက်ကတော်တော်များများကထွက်ပြေးလို့မရဘူးလို့ရိုးရိုးသားသားထင်သလား။ သေချာတာပေါ့၊ ကျွန်ုပ်၏အခမဲ့ငါးမိနစ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးနောက်သူသည်သူ၏ကီးဘုတ်များအားလုံးကိုသူပစ်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူသည်ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ရန်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုထုတ်ယူတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ”
တကယ်တော့ Manwin သည်အကောင်းဆုံးသောအရှည်၏မေးခွန်းကိုလေ့လာခဲ့သည်။ "ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်မိနစ်၊ သုံးမိနစ်၊ ငါးမိနစ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ " “ Content ပိုင်ရှင်အတွက်အကောင်းဆုံးပြောင်းလဲမှုကသုံးမိနစ်ပဲ။ ပိုက်ပြွန်နေရာများအတွက်အကောင်းဆုံး - surfer ပြန်လာရန် - ၅ မိနစ်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က ၃ ယောက်ကနေ ၅ ယောက်လောက်ကိုအမြဲတောင်းတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို ၇ ယောက်ကနေကိုးယောက်လောက်ပို့ရင်သူတို့စိတ်မဆိုးဘူး။
ဇွန်လ, 2014 - porn ချ. စတီဗင် Hirsch က You Tube ဆိုဒ်များအသုံးပြုခြင်းကိုသိမ်းဆည်းထားပါရန်လို
r / NoFap ပို့စ် - ဤသည် porntube က်ဘ်ဆိုက်များတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး junkie သို့သင်ပြောင်းပုံ
အခမဲ့အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသည့်“ ပြွန်” ဆိုဒ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူနှင့်တန်းတူဖြစ်သည်။
Porn သည်သင်၏ ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်မျိုးပွားမှုတို့ကိုပြန်လည်ပြုပြင်သည်။ တိုက်ဆိုင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့လူသားတို့ဂရုစိုက်သောအရာနှစ်ခုမှာတိုက်ဆိုင်စွာမဟုတ်ပါ။
ဤ ဦး နှောက်၏ဤအပိုင်းသည်အလွန် neuroplastic ဖြစ်ပြီးသင်ရရှိသောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အလျင်အမြန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်အတွက်သူ့ဟာသူအားဖြည့်ပေးသည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၌, ဒီစည်းနှောင်အောင်မြင်သောတွေ့ဆုံမှုပြီးနောက်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုပိုချင်စေခြင်းငှါထင်ခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကသင့်အားအစစ်အမှန်မိန်းမများထက်ပိုသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် pixel များကိုလိုလားစေလိမ့်မည်။ အဆိုးဆုံးအနေဖြင့်သင့် ဦး နှောက်ကိုလုံးလုံးလျားလျားမထိတွေ့နိုင်ခြင်းကြောင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဘယ်တော့မှရနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
အခုငါဒီမှာရှိနေတဲ့မင်းအများစုသိကြလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ဤစာသားထဲမှာအာရုံစူးစိုက်ချင်ပါတယ်အဆိုးဆုံးအမြတ်ထုတ်ခဲ့ကြပြီညစ်ညမ်းစွဲလမ်း - ညစ်ညမ်းအပေါ်ပိုက်ဆံဖြုန်းမည်ဟုအစစ်အမှန် junkies - သူတို့စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏အရင်းအမြစ်ကြောင့်! အကယ်၍ အမှိုက်များမရှိလျှင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ (လူတစ် ဦး တည်း မှလွဲ၍) မှလွဲ၍ မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများမရှိပါကအမှိုက်များကိုမဖန်တီးနိုင်ပါ။ ဤသံသရာသည်အစဉ်အမြဲဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေသည်။
သင့်အား“ လွတ်လပ်သောလိင်” (ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုရှုထောင့်မှကြည့်ရှုခြင်း) ကိုအကန့်အသတ်မရှိသုံးပါ။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအသစ် fetishes နှင့်ညစ်ညမ်းတပ်မက်ဖို့တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ rewiring ကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီခြင်းဖြင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုအပိုင်စီး။
မင်းကိုထူးဆန်းတဲ့ fetishes ဒါမှမဟုတ်သင်ပြွန်ထဲမ ၀ င်နိုင်တဲ့“ အရည်အသွေးမြင့်တဲ့” porn ကိုတပ်မက်ခြင်းသို့လှည့်ပါ
အခမဲ့ပြွန်များ၏ထုတ်ကုန်များမှာသငျသညျအဘယျသို့ထင်ပါသလဲ ကလစ်များပေးအပ်? ကြော်ငြာတွေကိုရောင်း?
သင် သူတို့ရဲ့ PRODUCT မှဖြစ်ကြသည်။
The tube sites များ၏လုပ်ငန်းသည်မင်းကို junkie အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင့်အားစွဲလမ်းမှုအတွက်အကျိုးရှိမည့်ကုမ္ပဏီများသို့သင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာပြွန်ကွန်ရက်တွေဟာသင့်ရဲ့ကြီးထွားလာနေတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေထဲကကြော်ငြာဒေါ်လာတွေကိုထုတ်ပေးနေတယ်။
ကြော်ငြာတွေကိုရောင်းသူတို့ကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအကျိုးမပေးနိုင်စေသည်ဘယ်အရာကိုမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာတကယ်တော့တစ်ဦးတွင်ရှိ ကျန်းမာ-လူတစ်ဦး-to-junkie-converter။ သူတို့မဟုတ်ရင်အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကမျိုးသုဉ်းသွားလိမ့်မယ်။
reddit - သေးပါဘူး: မိန်းမတွေမှာယခုထက်ပိုသောပုံမှန်ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့လမ်းအတွက် NoFap မြှင့်တင်ရန်
အမျိုးသားများအတွက်ဤမျှလောက်ပြည့်တန်ဆာယခုထက်ပိုသောပုံမှန်ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ NoFap မြှင့်တင်ရန်ကြောင်းညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့် desensitized ဖြစ်လာကြပါပြီ။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းက ၂၅ နှစ်အရွယ်အပျိုစင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့မွေးနေ့မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ (ဒါကမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူ့ဘဝကအဲဒါတစ်ခုတည်းသောနောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ) ။ ကွန်ဒုံးကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကလုပ်ခလစာပြတ်တောက်မှုပြသနာအချို့ရှိတာကိုသိပြီးသူမ (၀ င်ငွေမြင့်မားသောအစောင့်အကြပ်) ဖြစ်သော callgirl ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားရပ်တန့်ရန်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြာရှည်စွာရှောင်ကြဉ်ရန်ပြောခဲ့သည်။ ဤသူငယ်ချင်းသည်လူမှုရေးအခက်အခဲများရှိသောရှက်တတ်သူဖြစ်ပြီးသူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါသူ့ကိုအမြဲတမ်း NoFap စလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ သူမ callgirl ပြောတာကတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
ငါပြည့်တန်ဆာမယ့်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေမဟုတ်ဘူး။ ငါကဆန့်ကျင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တကယ်ဖြစ်၏။ ကိုယ့်ကိုသင်ယောက်ျားတွေနှင့်အတူဤစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းဝေမျှချင်တယ်။
ကောင်းတဲ့အလုပ်။ ကံဆိုးစွာတိုက်ရိုက်လေ့လာမှုမရှိခြင်းသည်များစွာသောသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထိခိုက်နစ်နာမှုများမခံစားရမှီတိုင်အောင်၎င်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။ သို့သော်လူတို့သည်ယင်းကိုမြင်ပြီး၎င်းသည်အလွန်ဆိုးရွားခြင်းမတိုင်မီနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအမြဲရှိသည်။
ငါပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ PIED ၏အဓိက '' အရှိန် '' ဖြစ်ကြောင်းအတော်လေးယုံကြည်မိပါတယ်။ ဒါဟာဆက်ဆက်ငါ့အတွက်ဖြစ်ခဲ့သည် ...
အကယ်စင်စစ်ငါ့အဘို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်သာဒေါင်းလုပ်လုပ် porn အပြည့်အဝအရှည်ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနမ်းခြင်းမှဒဏ်ငွေစိုက်ထူခဲ့သညျ။
ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် bam ပေါ်သို့ရောက်ခဲ့သည် ... နှစ်နှစ်အကြာတွင်မစိုက်ထူခဲ့သည်။
ငါ 11 / 12 မှာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ဒုတိယနမူနာ 30 မှလင့်များခဲ့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များငါ့အဘို့အတော်လေးစွဲလမ်းခဲ့ကြသည်။ ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များကတလျှောက်ရောက်လာသောအခါရုံတစ်ခုလုံးအသစ်သောအဆင့်အထိယူလေ၏။
စင်စစ်ပျော့ပျောင်းသော၊ DVD နှင့် ၂၀ စက္ကန့်ကြာသောကလစ်များသည်ကျွန်ုပ်အားစစ်မှန်သောလိင်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုနည်းစေပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၌ ED နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်လိင်ဆက်ဆံမှုမြင့်မားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
အမှန်ကတော့ P အစောပိုင်း P သည်တစ်ခါတစ်ရံဘီယာအနည်းငယ်နှင့်တူသည်။ ပြွန် site များသည်နေ့စဉ် scotch ပုလင်းအနည်းငယ်နှင့်တူပြီးအရက်ဖြစ်လာရန်အချိန်များစွာမလိုတော့ပါ။
ငါ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်ရုပ်ပုံများကိုစတင်ခဲ့သည်။ ငါမြန်နှုန်းမြင့်ပစ္စည်းပစ္စယသို့ရောက်ပြီးနောက် 90 ခန့်အကြာသည်အထိ ED ပြproblemsနာများရှိခဲ့ဘူး။ ငါ၌ညစ်ညမ်းသောအများအားဖြင့်ဒီဗီဒီများကိုအပတ်တိုင်းတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်၊ ED ပြproblemsနာမရှိသောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသည်။
၎င်းသည်သင်လိုချင်သောမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုခုန်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုနောက်နှင့်နောက်တစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောမြန်နှုန်းမြင့် steaming ဗီဒီယိုများဖြစ်သည်။ သင့် ဦး နှောက်ကအရမ်းအားရတယ်
ဗီဒီယိုများသည်ရုပ်ပုံများထက် ပို၍ လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမဟုတ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကပုံရိပ်တွေမှာအပြုအမူအပြောင်းအလဲတွေအပြင်သိသာထင်ရှားတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနေသလားဆိုတာစိတ် ၀ င်စားစရာမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ အချို့သော ကြည့်ရှုသူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။
ငါဂယ်ရီနှင့်အင်တာဗျူးတွင်စကားကိုနားထောငျသူရေကူးဝတ်စုံနဲ့ရုပ်ပုံလွှာမဂ္ဂဇင်းကနေ ED တယ်သူတစ်ကောင်လေးသိတယ်ဟုပြောသည်။
ခင်ဗျားတို့တစ်ခုခုသုံးနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် tube sites တွေကသိပ်မကောင်းဘူးလား၊ ငါသူတို့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တာဘယ်လောက်စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ browser history ကိုဖျက်ပစ်ရန်အလွယ်တကူဖုံးကွယ်ထားသောဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ငါကအနုပညာမဆန်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာအဆိုးဆုံးလို့ထင်တယ်၊ သဘာဝမဟုတ်ဘဲညစ်ပတ်ပေမဲ့အော်ဂဇင်ကိုနှိုးဆွဖို့ porn ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ၊ ငါ ED ကိုပေးတာထင်တယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ငါထင်တယ်
ငါထင်သော်လည်းပဲရေကူးဝတ်စုံနဲ့ပုံနဲ့ဘယ်တော့မှမဆို vids နှင့်အတူလုပ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဖြစ် Thatd
ဤဆောင်းပါးသည်ငါ၏အတှေ့အကွုံမြားတိုက်စစ်ပါတယ်။ tube က်ဘ်ဆိုက်များသည်ငါနှင့်အတူတစ်ထစ်သောအရာတို့ကိုဖွင့်ကန်။
ဤဆောင်းပါးသည်ဤ subreddit အဘို့ဤမျှလျောက်ပတ်သည်။ ငါ PTube အင်တာနက်ဆိုက်များတွင်တိုးချဲ့သင်တို့နှင့်အတူအဖက် dis-စိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သို့မဟုတ် P ကိုစွဲလမ်းတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, ထင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကနောက်ဆုံး 10-15 yrs များအတွက်နီးပါးနေ့တိုင်း PMO ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတစ်စုံတစ်ဦးကမှလာ၏
ငါဆောင်းပါးမှာပြောထားတာနဲ့ ၁၀၀% သဘောတူတယ်၊ ငါဟာညစ်ညမ်းတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းပြtheနာကိုပြောင်းပြန်လုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ငါဟာတကယ့်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့အမှန်တကယ်ကယ်နုတ်နိုင်မယ်။
“ မင်းကမင်းကိုရှာနေတယ်။ ကျိန်ဆိုထားတာ ၁၀၀ မှာမင်းကပြီးသွားမှာပါ၊ လွန်ခဲ့သောစက္ကန့်နှစ်ဆယ်က [thumbnail] သည်မင်းမြင်ဖူးသမျှထဲမှာအပူဆုံးအရာဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းသင်ပြန်ပစ်လိုက်သည်။
ဒီတော့မှန်ပါတယ်၊ လူတစ်ယောက်ဟာစက္ကန့်ပိုင်း (မိနစ်တောင်မက) အတွင်းလူတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးဆွဲဆောင်နိုင်မှာလဲ။ ငါ stash ရှိခဲ့တဲ့အခါငါငါ၏အအစည်းအဝေးများ 1/5 သို့မဟုတ် 1/10 သာရည်ညွှန်းလိမ့်မယ်။ ငါထင်တာကတော့သူကပြောတယ်၊ သူကငါကိုသဘောကျတယ် (ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကြိုက်တာပါ ၀ င်ပေမယ့်ပစ္စည်းအသစ်တွေအတွက်) ငါအရမ်းအားကောင်းတယ်” လို့တွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ငါသည်ငါ၏ M ကိုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကစဉ်းစားမိတယ်။ ကောင်းသော link ကို
yeah ငါခံစားချက်ကိုငါသိ၏။ ငါအရမ်းစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသော stash ရှိသည်လိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုဆွဲထုတ်ဖို့ငါဘယ်လောက်မကြာခဏစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တာလဲ ခဲသည်။ ပိုမိုပူပြင်းသည့်ကလစ်တစ်ချက်ကိုဖမ်းယူပြီး၎င်းကိုသိုမှီးထားခြင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သည်။ ငရဲ၊ ငါတစ်ခါမှမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တာမှတ်မိသေးတယ်။ အဲဒီမှာပဲထိုင်လိုက်တယ်။ ငါအဲဒီမှာရှိခဲ့သည်ကိုသိပေမယ့်ဘယ်တော့မှမသုံးပါ။